Tampenan’ny Rosiana Amin’ny Vola Tokoa Ny Lavaka Amin’ny Arabe · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Marsa 2016 3:51 GMT
Mandevina ny vola madinikany amin'ny lavaka amin'ny arabe nandritra ny hetsika manohitra ny faharatsian'ny lalana ny Rosiana. Sary: Alexander Rebrishchev / YouTube
Manerana izao tontolo izao, tany lonaky ny ahidratsy, rano mihandrona ary fihetsiketsehana tsy ampoizina ny lavadavaky ny arabe sy ny arabe simba amin'ny ankapobeny. Tamin'ny herintaona, olona iray miantso ny tenany ho “Wanksy” no nandehandeha mitifitra loko sary filahiana ngezabe manerana ny lavaka amin'ny arabe ao Manchester, Angletera. Tamin'ny Martsa 2013, nanasa ireo mpamakiny ny gazety Slaovaky iray mba “hanara-maso lavaka iray amin'ny arabe sy mijery ny fiitarany.” Roa taona talohan'izany, namboly hazo tamin'ny lavaka amin'ny arabe ireo olom-pirenena sasany tsy faly tany Zimbaboe. Ireo no hetsika rehetra ( ny sasany nahomby kokoa noho ny hafa) hanerena ny manampahefana eo an-toerana hanamboatra ny lalana.
Manana ny politikany amin’ ny lavaka amin'ny arabe ihany koa ny Rosiana izay tia milaza fa fahavoazana roa lehibe indrindra ho azy ireo ny “lalana adala sy ratsy”.
Tamin'ny volana May 2015, nipoitra tamin'ny lohateny lehibe manerantany ilay mpikatroka ao an-tanànan'i Rosia, Ryazan noho ny fitifirana loko ny sarintavan'ny ben'ny tanàna manerana ireo lavaka amin'ny arabe. Nanjary niha-malaza be kokoa izany raha nandoko indray ny soratsoratra (graffiti) ny [fiadidiana] tanàna, alohan'ny nanamboarany ny lavaka amin'ny arabe. (Ambonin'izany moa dia niverina indray ny lavaka noho ny haratsin'ny fanamboarana ka nipoitra indray tao anatin'ny iray volana.)
Tsy voavidim-bola. Nolokoina ny ambonin'ny soratsoratra (graffiti) tamin'ny lavaka amin'ny arabe ho fanebahana ny ben'ny tanànan'i Ryazan. Lavaka amin'ny arabe kosa tsy voakitika mihitsy
Tao anatin'ny dimy herinandro, niaina andiana korontana vokatry ny firoborobon'ny lavaka vaovao amin'ny arabe indray i Rosia. Arakaraky ny toe-tsainao manoloana haratsin'ny fkarakarana ataon'ny sampan-draharaham-panjakana sy ny arabe mampidi-doza, no hampiala-voly na hahatezitra anao amin’ ireto tantara ireto.
Tao an-tanànan'i Lipetsk (tokony ho 500 kilometatra atsimon'i Moskoa), nandrakitra tranga roan'ny tsy fahaiza-miasa amin'ny fanamboarana arabe ny mponina ao an-toerana. Niseho tamin'ny 20 Janoary ny tranga voalohany, raha nalain'ilay lehilahy iray antsoina hoe Denis Popov horonantsary ny mpiasa mandraraka tara ao anaty lavaka ao amin'ny araben’ ny tanàna mbola rakotra oram-panala. Natao ihany ny fanamboarana na dia efa mila tsy ho tazana, mba tsy hilazana hoe tsy tazana mihitsy aza ny lavaky ny arabe noho ny oram-panala. Manome fanehoan-kevitra maroloko i Popov naka ny horonantsary, mamazivazy fa tokony mampiasa endrika vaovaon'ny “nanoteknolojia” ity fanamboarana hafahafa ity. Nahasarika mpijery maherin'ny 50.000 tao amin'ny YouTube ny lahatsary.
Niseho 11 andro taty aoriana ny tranga faharoa – mbola tao Lipetsk ihany, raha naka horonantsary ny fanamboaran-dalana mbola tsy misy atidoha kokoa (noho ny tranga voalohany) ny lehilahy iray hafa ao an-toerana . Ao amin'ny lahatsary, manaisotra oram-panala maloto ny mpiasa iray ary mandraraka vatokely ao anaty lavaka misokatra amin'ny arabe, ary manitsakitsaka izany amin'ny angadiny. “Ö! Ny teknolojia farany, fizarana faharoa! “Hoy ilay lehilahy nanatontosa ny horonantsary mamazivazy, toa miresaka momba ny lahatsarin'i Popov “nanotech” tamin'ny fiandohan'ny volana.
Tamin'ny faran'ny volana Febroary, tokony ho 145 kilometatra atsimo lavidavitra kokoa, nanapa-kevitra hisarika ny saina manoloana ny olan'ny lavaka amin'ny arabe ny mponina ao amin'ny tanàna kely iray ivelan'i Voronezh, manova ny sasany amin'ireo arabe hitrangan'ny lozam-pifamoivozana ratsy indrindra ho zaridainam-boninkazo. Nandraraka vola madinika iray gony anaty lavaka iray amin'ny arabe ihany koa izy ireo, alohan'ny handevenana izany ao ambany simenitra. “Volanay ireto. Tahaka izao no fomba handevenanay ny volanay, “hoy ireo vondrona lehilahy marobe tamin'ny lahatsary nalefa ho an'ny Filoha Putin, mangataka fanampiana. Amin'izany lahatsary izany, rehefa nahavita namboly voninkazo sy nandevina ny volany ireo lehilahy, dia mandeha miasa eny amin'ny lalana miaraka amin'ny boatin-doko atifitra, ary manao kisarisarim-boninkazo manerana ny lavaka amin'ny arabe.
Ho diso fanantenana i Wanksy sy ny mpanohana azy raha mahatsikaritra fa tsy nisy mihitsy na dia ira aza nanao sarim-pilahiana.
2 herinandro izayHafanàm-po nomerika